Samsung Galaxy S Wifi 5.0 tijaabo (I) | Androidsis
xikmad | | Reviews, Samsung
Magacyada awgood ee tan gibris kama maqna Waxay ku saabsan tahay Samsung Galaxy S ciyaaryahanka Wifi 5.0 tdi, a media player laga bilaabo nooca Kuuriya oo ku saleysan Android. Qeybtaan koowaad waxaan kaga hadlaynaa qayb jir ahaaneed ee terminalka iyo dhammaan qeybaha uu ka kooban yahay.
Aynu ku bilowno ka hadalka ugu caansan, ee cabirrada. Qalabka su'aasha laga qabo 141 × 78,2 × 11,9mm, taas oo ka dhigaysa mid aad u fiican. Ma gaarayo cabirka kiniinka sida Galaxy Tablet 7 ″, oo wuxuu kasii sarreeyaa taleefannada gacanta ee cabbirka Desire HD.
La pantalla mashquul badan oo ka mid ah hore madow taas oo, sida cabirka qalabka, aad u weyn tahay. Shaashad 5 inji ah TFT-LCD con qaraarka WVGA (800x480pixels) ee 68Hz. Shaashadan shaashad ah wax dhib ah kuma lahaan doontid inaad ku daawato dhammaan noocyada waxyaabaha jira oo xitaa aad awoodid inaad ku qoroto kumbuyuutarka labada gacmood, haddii aad ku nasatidna meel kasta oo ka mid ah, waxaad awoodi doontaa inaad isticmaasho laba farood oo gacan kasta oo aad qaadato faa iidada kumbuyuutarka QWERTY ee shaashadda taabashada. Qeybta badhanka ee shaashadda ka hooseysa waxay la mid tahay tan Samsung Galaxy S, oo leh Badhanka badhanka bidix, badhanka dambe ee midigta, labadaba taabasho, iyo badhanka badhanka jirka ee guriga.
Dhinaca hore, marka lagu daro booska uu ku yaallo qalabka wax lagu dhegeysto, waxay leedahay a kamaradda hore VGA in loo isticmaali karo wicitaanada fiidiyowga, taas oo qaybtan ka dhigaysa mid dhammaystiran.
In gadaal, oo leh a sanduuq madhan aad u qurux badan, halkaas oo marka lagu daro akhrinta dhammaan CE iyo FCC shaabadood iyo astaamaha Samsung iyo qoyska Galaxy, waxaan haysannaa kamarad, kiiskan 3.2MPx, taas oo aan haba yaraatee wax xun ahayn. Waxaa laga yaabaa in 5MPx qalabkani uu noqon lahaa mid kaamil ah, laakiin marka la eego qiimaha, qalabka wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu xadido waxyar
Waxaan sidoo kale heysanaa laba boos oo loogu talagalay labada kuhadal ee taleefanku ku daro, inay kuu xaqiijinayaan a maqal maqal ah kuwaas oo aan dad badani ku faani karin, oo tan iyo intii suurtogal ah, leh cod wanaagsan oo leh awood aad u yar.
Cidhifka terminalka, oo ay weheliso gogo 'lacag ah si loo kala saaro labada qolof, waxaan haysannaa keypads-ka mugga, si loo damiyo / qufulka iyo isku xirnaanta jirka, mini USB lacag bixinta iyo wareejinta xogta qeybta hoose iyo 3.5mm jaakad ag maqal samaacadaha dibadda. Hoos waxaa sidoo kale micro ah si aad ugu isticmaali karto wicitaanada adoo adeegsanaya fariimaha internetka.
Dusha sare waxaan ku leenahay booska microSD. Halka uu laacibkani leeyahay 8GB xasuusta gudaha ah (kuwaas oo aan u adeegsan karno 5Gb si aan u qaadno faylalkayaga wax lagu duubo ee loo yaqaan 'multimedia files', kuwa kalena 3 ayaa loo daayay barnaamijyada iyo nidaamka hawlgalka) ku ballaar xusuustaada kaararka illaa 32Gb.
Haddii aan ku sii wadno qalabka ay keeneyso, waxaan helnaa a Processor Snapdragon ARMv7 rev2, xawaaraha 1GHz. Sida RAM wuxuu keenayaa 381MBAniga oo tixgelinayana in aysan u baahnayn in ay la shaqeeyaan dhammaan hababka Android ee taleefanka, waxay ila tahay igu filan. Isticmaalka caadiga ah, waa dhif in la cuno wax ka badan 100MB.
Dhammaan isku xirnaanta la doonayo. Wifi B / G / N, Bluetooth, GPS, dareemayaal dhaqdhaqaaq iyo FM Radio. Ciyaaryahan MP4 waxaan u maleynayaa inay tahay wax dhameystiran.
Ugu dambayntiina batteriga, kaas oo leh awood 2500mAh. Laga soo bilaabo Samsung waxay xaqiijinayaan inay awood u leedahay soo saarista 8h fiidiyow iyo 60h muusig, taasoo na siineysa dhibic dheeri ah ciyaartooygan la qaadan karo si aan ugu adeegsan karno banaanka guriga. Intii yarayd ee aan la joogay, in la dhaho WiFi iyo taabashada badan (shaashadda) waxay la kulmaysaa 8h hubaal. Laakiin waa inaan si buuxda u tijaabiyaa madax-bannaanideeda.
Waxaan ku soo bandhignay qalabka qaybtan koowaad, waxaan uga tagaynaa barnaamijka softiweerka iyo khibrada isticmaale ilbiriqsi. Ciyaaryahankan, Samsung wuxuu u taaganyahay guusha Apple iPod Touch. Laba fikradood oo kala duwan oo aad isugu eg isla waqtigaas, tan ayaa ku hoos jirta Android, dabcan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Samsung Galaxy S Wifi 5.0 tijaabada (I)
qiimo? kaliya USA ama tmb Mexico
Ku jawaab davidd
Goorma ayey imaanaysaa Mexico?
Ma i caawin kartaa? Waxaan soo iibsaday ciyaartoygan waxaanan raadinayaa shabakadda kiis ama kiis laakiin nasiib uma yeelan. Ma ii soo jeedin kartaa meel aan wax ka helo?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii kumbuyuutarkaan ku ciyaari karo qalab android system, waxaan ku weydiinayaa maxaa yeelay waa ciyaaryahan, sidoo kale maadama aadan ka hadlin midkoodna waana waxa kaliya ee aan u baahanahay inaan ogaado inaad iibsato…. Meelna kama hadlaan ciyaaraha ku saabsan kooxdan, ama fiidiyowyada cayaaraha kooxdan, fadlan, mahadsanid.
Waad salaaman tihiin dhamaantiin! Waxaan ku iibsaday dhowr usbuuc ka hor websaydhka FNAC ee Isbaanishka ah for 249 rar oo lagu daray. Waxaan rakibay codsiyo, ciyaaro, dhageystay muusig waxaanan daawaday filim. Aragtidayda hadda waa in ay tahay qalab ku habboon saamigiisa tayada / la qaadan karo. Xidhiidhka Internetka, hada waxaad haysataa shabakado Wi-Fi ah meelkasta oo aad joogto, laakiin markii aadan mid haysan waxaan ku xirey Laacibka mobilka adoo adeegsanaya adoo adeegsanaya qaabeynta iyo wax dhib ah.
Kajawaabida Jorge: haa, waad rakibi kartaa dhamaan barnaamijyada android-ka iyo ciyaaraha aad rabto.
Kajawaabida Mmr: Aniguba waxaan raadinayaa kiis wanaagsan. Waqtigaan la joogo, waxaan u adeegsadaa Kiis Caqli ah 6 ”akhristayaasha ebook. Waan ku habeeyay anigoo xumbada gelinaya gudaha si ay ugu habboonaato Ciyaaryahanka iyo sameecadaha. Waan sugi doonaa inaan arko haddii Noreve uu daboolka ka qaadayo tusaalahan maxaa yeelay horay ayaan u iibsaday iyaga ka hor waana jeclahay wax soo saarkooda wax badan.
Miyaad isku dayday sidii badmaax GPS ah oo magaalada ama wadista wadista ah?
Ku jawaab marianicor
haa, oo leh sygic. Maaddaama aysan lahayn xog waa inaad ka soo jiidataa GPS khadka, laakiin waa raaxo. Oo waxaa jira dhowr daalacashada ah ee loogu talagalay Android, taasi waa durbaba arrin dhadhan
Ku jawaab el_iulius
Mmr, waxa kaliya ee aan helay kadib markaan eegay oo eegay meelkasta maxaa yeelay sidookale waxaan raadinayaa dabool waa websaydhkan:http://shop.ebay.com.au/i.html?_kw=samsung&_kw=galaxy&_kw=S&_kw=wifi&_kw=5.0.Si qof ayaa og shabakad kale, waa lagu qaddarin doonaa inuu muujiyo.
Ku soo jawaab quesito
ciyaaryahanka leonardo galaxy dijo
subax wanaagsan! Wixii ku saabsan daboolka iyo qalabka, waxaa laga heli doonaa bisha Sebtembar dhammaan dukaamada. Waxay ka bilaaban doonaan guriga taleefoonka ... iyo inbadan oo taariikhi ah inta kale ee dukaamada. salaan
Jawaab ciyaaryahanka leonardo galaxy
Waxaan ka fikirayaa inaan soo iibsado qalabkan, shakigayga kaliya waa 4 "ama 5ta"?
Waxaan doorbidayaa 5ta laakiin wali wey ka weyn tahay inaad ku qaadato jeebkaaga
Ku jawaab si kasta oo la taabto
Waxaan ka imid Peru waxaan ka helay dukaamada Wong ..
Charles P. dijo
Waxaan ku dhowaa inaan ka ganacsado Galaxy 5 ″ ee Wong.
Ma ii sheegi kartaa sida ay isaga ula socoto?
Jawaab Carlos P
Waad salaaman tahay wax walbana waxaan haystaa 5 ″ waana mid aad u fiican inkasta oo ay wax weyn u yihiin jeebkaaga laakiin way qiil ka dhigaysaa maxaa yeelay waa cabir aad u raaxo badan maxaa yeelay mar dambe uma baahnid inaad ka walwasho isticmaalka qalin ... wax walbana waxay ku jiraan farahaaga. .. 🙂
Hadday cilad leedahay, ma awoodo inay u adeegsato kamaradda hore ee VGA wicitaannada fiidiyowga ee Skype laakiin si qurux badan ayey ula shaqeysaa Qik oo waxaa ka maqan badhamno ciyaaryahanka ah, haddii aadan haysan qalabka dhegaha lagu xiro ee 'Bluetooth' waa wax laga xumaado inaad leedahay si aad uga saarto kaniiniga si aad u furto shaashadda kadibna aad u bedesho heesta….
Inta soo hartay, waa wax aad u fiican, waxaad kala soo bixi kartaa boqolaal barnaamijyo iyo ciyaaro ka socota suuqa isla markaana si yaab leh u maamuli kartaa koontooyinkaaga shabakadaha bulshada
Haye paulo, intee ka timid? Xagee ka soo iibsatay samung galaxy player? salaan
Waxaan sameeyaa wicitaano fiidiyoow ah oo ku saabsan skype, waxa dhaca ayaa ah in uu jiray casriyeyn skype ah oo ay ku joojiyeen shaqooyinka qaar ee ku saabsan rootiga sanjabiilka iyo tan ay saameysay, ma aanan cusbooneysiin, sidaas darteed waxaan sii wacayaa wicitaannada fiidiyowga.
Ku jawaab Benomireto
Waan fiicanahay, waa kiniin aad ufiican mana weyna aad u weyn .. waa jeebkiisa oo xajmi weyn yahay !! Waxa ugu fiican fekerkeyga ayaa ah inaad u isticmaali karto inaad ka xakameyso kombuyuutarkaaga meel kasta oo leh xiriir Wi-Fi ah (oo lala yeesho kooxda wada hadalka ah), ka hel boqolaal barnaamijyo bilaash ah suuqa, maamul dhammaan xisaabaadka emaylkaaga, waad baari kartaa shabakadda si fudud, oo ah mid aad u wanaagsan oo tayo leh iyo qeexitaan ... waa hagaag, haddii ay jiraan wax la caayo, waa in aysan jirin daboolis ama ilaaliyeyaal tusaalahan ka jira Peru ama Ameerika kamana isticmaali kartid kaameradda hore skype.
Sideedaba waxaan hayaa 100 stikers kale si aan ugu badalo hal kaniini oo dheeri ah ... paulolm.953@gmail.com La hadal haddii aad xiisaynayso ama haddii aad taqaanno qof xiiseynaya
Waxaan horey uheystay Galaxy 5 ″, waxaan ku iibsaday anigoo ka fakaraya inaan awoodo isku xirnaanshaha gacanta iyo inaan dib u eegi karo dukumiintiyada .pdf ee Shahaadada Masterka. Shalay waxay ii sheegeen inay i siinayaan Ipad 2 oo ay ku jirto kharashka shahaadada mastarka, sidaa darteed waa inaan go’aansadaa haddii aan weli haysto Galaxy ama aan iibiyo.
Dhibaatada ah in aan la isticmaali karin kaamerada hore ee Skype sidoo kale waxay ku dhacdaa Motorola Atrix.
Samsung galaxy wifi 5.0 wuxuu leeyahay 3G
Goorma marka ilaaliyeyaasha shaashadda, daboolida iyo qalabka. Qalabku waa yaab, laakiin ma aqaano sida ay u iibiyaan wax soo saar iyaga oo aan taageero lahayn. Waxaan hayaa usbuuc 13, Nofeembar, 2011 mana heli karo wax qalab ah oo loogu talagalay ama shaashadda ilaaliyayaasha, daboolida, iyo wax kasta. Waa u qalantaa
Halkan waxaad ka heli kartaa daboolka Mexico. Salaan.
Waad salaaman tahay, hal su'aal, aad ayaan u wareersanahay tan iyo markii aan doonayo in aan iibsado Samsung Galaxy Player laakiin arinta ayaa ah in markii aan iibsanayay aan ogaaday in ay jiraan 2 nooc: Samsung Galaxy WiFi 5.0 iyo Samsung Galaxy S WiFi 5.0, marka hadduu qof i caawin karo midkee Waa farqiga u dhexeeya gala gala S oo leh galax la'aan S, aad baan u qaddarin lahaa wax badan maadaama dhinaca dambe ee ciyaaryahanka mid ka mid ah uu leeyahay samsung galaxy S iyo kan kale oo keliya samsung galaxy player .
Ku jawaab xander
Rodrigo SP dijo
Jawaab Rodrigo SP
Waa salaaman tahay, waxaan rabaa in aan ogaado haddii kamaraddu ay weyneyso? taleefanka galaxy s 2 ayaa leh maxaa diidaya?
Ma heli karo. ,,,, mahadsanid
WACAN HADDII GALAXYKAN AANU HAYN 3G XIRIIR KELIYA WIFI SIDII GPS-KA UU UU U DANBAYSAN YAHAY, WAAN LEEYAHAY MID AAN KA YAHAY COSTA RICA WAKHTIGANA OO KASTA OO AAN RABO GPS-KA WUXUU I SHEEGAA IN UU U BAAHAN YAHAY XIRIIRKA MACLUUMAADKA SHAQADA LEH
Ku jawaab Orojasportuguez
Waxaan weydiin lahaa inay jiraan wax tijaabo ah oo lagu samayn karo taleefanka. Waxay leeyihiin shaqo la yiraahdo tijaabada warshadda, laakiin ma codsan karo.
waxaan hayaa samsung galaxie ace, gt 5830l.
Laakiin ma aqaano sida loo sameeyo tijaabada tijaabada, waxa ay tahay inuu taleefanka sameeyo.